Farmaajo iyo Kheyre ayaa isku heesa ma waxqabad baa? (Warbixin) | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Farmaajo iyo Kheyre ayaa isku heesa ma waxqabad baa? (Warbixin)
Farmaajo iyo Kheyre ayaa isku heesa ma waxqabad baa? (Warbixin)
uddo xileedka Dowladda hada jirta waxaa ka haray hal sano iyo 2 bilood, xukuumad kasta waxqabad keeda waxaa lagu salleeyaa waxa ay ka qabato arimaha Amniga, Dhaqaalaha, Dhameystirka Dastuurka, Dib u heshiisiinta, Adeegyada Bulshada, Siyaasadaha arimaha dibedda iyo gudaha, Doorasho qof iyo cod ah in dalka la gaarsiyo IWM.
Xukuumadda hada jirta arimahaa iyo kuwa kale oo badan maxay ka qabatay oo muuqda maanta?
Amniga dalka faraha ayuu ka baxay ilaa heer jid cadayaasha Xaafadaha Xamar ganjeelo lagu xiro, taas oo keentay bur-bur dhaqaale iyo isu socodki shacabka oo gabi ahaanba meesha ka baxay. Shacabkiina amni ma helin oo maalin kastaa si Jumlo Jumlo ah loogu laayaa qaraxyo.
Dhaqaalaha dalka iyo dadka waa la curyaamiyay, dadkii waxa haysata dhibaato dhanka Dowladda iyo Al-Shabaab ah, dowladdu waxay cunaqabateeyn dhan walba ah saartay ganacsiyadii shacabka, mar hadii jidadki ka xirtay sidoo kale canshuur joogta ah oo jiha toosan laheen ay ka qaado. Taa waxaa usii dheer shacabkii in Al-Shabaab maalin cad canshuurto oo ay ku hayso handadaad joogta ah.
Dastuurki in la dhameystiro iska daa waxaa la gaarsiiyay heerkii ugu hooseeyay ee dastuur la gaarsiiyo, Xukuumadda si indha la’aan ah ayay ugu tumataa Dastuurka KMG ah, Guddoomiye Kuxigeenka 1aad ee Barlamaanka waatuu mar lahaa dastuur kan sax ma aha kii saxda ahaa wa lumay oo hada ayaa nuqolo kamid ah la helay (Wa dastuurkii Siyaad barre oo nuqulo laga soo amaahday) oo danta laga leeyahay tahay in dadka lagu caburiyo.
Dib u heshiisiin in dadka loo sameeyo waxaa bedal looga dhigay hurin dagaalo joogta ah, sida wixii ka dhacay Baydhabo oo shacab Soomaaliyeed lagu xasuuqay, hadana ka socda Jubbaland iyo Galmudug oo ciidamo Ethiopian ah lasoo ijaartay si loogu caburiyo shacabka iyo siyaasiyiinta Jubbaland iyo Galmudug.
Cid walba oo Madaxda hada joogta ka fikir duwan waxaa lagula dagalaa awooda dowladda sidii falkii lagu sameeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Madaxweynayashii hore ee soo hogaamisay dalka. In guddoomiyihii hore ee barlamaanka Jawaari laga tuuro kursiga waxaa ciidamo laga soo saaray aagaga dagaalka oo la geeyay Barlamaanka.
Hawadii dalka oo sidii lagu soo celiyay la ogyahay iyana cidii madaxda ka aragti duwan ayaa isbaaro loogu dhigtay. Cid shirar qabsan karta ama banaan bixi karta ma jirto, saxaafad xor ahna waa la diiday.
Adeegyada Bulshada wax muuqda lagama qaban, taa badalkeed dadkii waa looga sii daray, kuwa biyo ku fatahaan oo aan loo sameeyn biyo xireeno, Kuwa jidadka ay isbitaalada ku aadi lahaayeen looga xiray ganjeelo waaweeyn iska daa in isbitaalo cusub loo sameeyo iyo waxbarashadii oo la siyaasadeeyo. Waxa kaliya ee Madaxda Dowladda u arkaan wax qabad waa inay sameeysteen Ururka Xoogaga Wadaniyiinta oo islaamo masaakiin ah oo Timir baa leydin siin lagu yiri u heesaan Madaxweynaha (waa dhaqankii Aabe Siyaad).
Doorashooyinka 2020/2021 meel iyo sida ay wax usocdaan lama oga, saamileeyda siyaasadda heshiis lalama aha oo taladooda lama rabo, hab dhaqanka Madaxda hada joogto waxa laga dhadhansan karaa oo kaliya inay ogaleen doorasho xor iyo xalaal ah balse taa badalkeed ay rabaan ku darsasho ama wax doorasho u eg oo xoogag wadaniyiin lasoo aruurshay ay iyagu doortaan.
Waxaa nasiib daro ah iyadoo arimahaa iyo kuwa kale oo badan oo lagu fashilmay ay jiraan in dadka wax qabad looga dhigo Farmaajo iyo Kheyre ayaa isku heesa!
W/Q: Cabdullaahi Xasan Maxamed (C/llaahi Samoow)
Previous articleKASHIFAAD: Murashax Qoor-Qoor oo dhabarka Ka wareemay Odawaa & Guutaale
Next articleVideo: Carro ka dhalatay odayaasha Galmudug ee DF ay ka saartay liiska 135-ka
DHAGEYSO: Qasaaraha Al-shabaab oo Weerar Gaadmo ah ku qaaday Duleedka Bosaaso iyo Wararkii ugu danbeeyay
DAAWO: Al-Shabaab & Mid ka mid ah Beelaha weyn Hishiis Halis ah kala saxiixday….
Dowladda oo sheegtay in howlgal lagu qabtay Xubno Shabaab ah+Magacyada Xubna la qabtay
Wiil Soomaaliyeed Oo Lagu La’yahay Dalka Mareykanka
NISA oo gacanta kusoo dhigtay nin halis ku ahaa nolosha dad farabadan oo kunool Magaalada Muqdisho
Abiy Ahmed Oo Lacag Soomaaliya & Kenya Loogu Talo Galay Gacanta Ku dhigay
XOG+DHAGEYSO: Wararkii Ugu Danbeyay ee Baydhabo Iyo Musharaxiin Shaaciyey Arimo Sir ku ah Qorshaha Villa Somalia ee Doorashada K/Galbeed
Maxay Alshabaab Maalinle uga dhigeen Qaraxyada Muqdisho..? (Afar Qodob oo xasaasi ah)
NISA oo sheegtay xubin amniyaadka Shabaab in la soo qabtay